Comments By Postအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - ဖော့(စ)ထရော့ချာလီ - kyeemiteမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - Admin Kai - GaviaGirlကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - awra-cho - chitတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ - Myo Thantသို့ ချစ်သောဖေဖေ - kyeemite - Myo Thantရထား ထွက်တော့ မယ် - ခရီးသည်ကြီးဦးဖိုးလူနှင့် ပထမဆုံးများ - kyeemite - လူကလေးသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် -etoneရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - Ei Kyipyar - Yin Nyine Nwayမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - panpan - ဦးကြောင်ကြီးPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - awra-cho - kyeemiteနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - ကြည်ဆောင်း - Ei Kyipyarအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - TheWinner Getprize - kyeemiteဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews - awra-cho - Kaung Kin PyarCongress - Admin Kai - Ei Kyipyarနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၄) - သူကလေး - သူကလေးစက္ကန့်သုံးရာ ဘာဝနာ - kyeemite - ဆူးစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - kyeemite - မောင် ပေကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - သူကလေး - ခင် ခကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - ခင် ခ - kyeemiteငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - သူကလေး - အလင်း ဆက်ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပမှာ - kyeemite - သော်ဇင် (လွိုင်ကော်)ပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - ခင် ခ - TNAလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - မွေ့ကေသာ - TNAအတ္တဆန် - kyeemite - ခရီးသည်ကြီးအဟံ ပထမံ - TNA - ဆူး``တစ်ခါက အင်းယားရယ်´´ - ဦးကြောင်ကြီး - TheWinner Getprizeလူပါး ပုလင်းထိ - ဆူး - ဆူးကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - ဆူး - ဆူးယုံလား? - ဦးကြောင်ကြီး - ဦးဦးပါလေရာEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77850 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67215 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66706 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (58570 Kyats )MaMa (57767 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...